फोटो फिचर Archives - Page7of7- Nawalpur Dainik
Jan252021 by Nawalpur DainikNo Comments
लोकप्रिय सुन्दरी नायिका केकीको यस्तो लोभ लाग्दो सबैलाई मोहित बनाउने सुन्दरता हेर्नुस् (१७तस्बिर मा)
जीवनशैली, फोटो फिचर, हेडलाइन
अभिनेत्री केकी अधिकारी म्युजिक भिडियोमा समेत व्यस्त केकी सुन्दरताका कारण पनि चर्चामा रहने गर्छिन् । व्यापारिक हिसाबले चलचित्र असफल भए पनि उनको अभिनयको भने तारिफ हुने गर्छ । केकी सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहने गर्छिन् । बेलाबेलामा देशको राजनैतिक र समसामयिक विषयमा समेत आफ्नो अभिव्यक्ति दिने कारण केकी सचेत नायिकाका रुपमा पनि चिनिन्छिन् । सुन्दरता र अभिनयका कारण लाखौँ फ्यान कमाएकी अभिनेत्री केकी अधिकारी । नायिकासँगै फिल्म मेकिङमा समेत व्यस्त केकी पछिल्लो समय निकै व्यस्त छिन् । उनी यही क्षेत्रमा सधै सक्रिय रहन सकियोस् भनेर चलचित्र मेकिङमा समेत लागेको बताउँछिन् । ...
नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटिबेटीको छ भन्ने गरिन्छ केहि नेपालि हरु भारतीय संग बिहे गरेर उतै बसेका छन् केहि भारतीय हरु नेपाल बिहे गरेर आएका छन त्यस्तै आज हामि भारतीय कलाकार हरु जसको नेपाल संग नाता रहेको बारेमा चर्चा गर्ने छौ ।केहि भारतीय बलियुड कलाकार हरु जसको नेपाल संग पारस्परिक सम्बन्ध रहेको छ । ति कलाकार हरु हुन् गोबिन्दा अहुजा,माला सिन्हा,भारती सिंह,श्रृति झा ,अहमद खान आउनुहोस चर्चा गरौ कसरी साइनो रह्यो यी कलाकारहरु संग। नेपालीहरुको बलिउडप्रतिको सम्बन्ध माला सिन्हा बलिउडमा कुनै समयकी चर्चित रहेकी नायिका माला सिन्हा नेपाली हुन । उनको बुबा नेपाली क्रिश्चियन हुन् । माईती घर नामक चलचित्रमा काम गरेर बलिउडमा नै आफनो करियर बनाएकी माला सिन्हाले नेपालकी छोरी बनेर बलिउडमा नाम र दाम दुबै कमाईन् । यी हुन् नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध भएका भारतीय चर्चित कलाकारहरु । यीनी नेपालकाे ज्वाइकाे नामले प्रख्यात छ...
यि हुन आफ्नै छोटो पहिरनले धोका दिएपछि सामाजिक सन्जालमा भाइरल बनेका १० नायिकाहरु….(तस्बिर सहित)
जीवनशैली, फोटो फिचर
यी १० नायिकाको छाेटाे लुगाले शरीर सम्हाल्न नसके पछि…नायिकाको पहिरनलाई लिएर विभिन्न चर्चा–परिचर्चा हुन्छ। हलिउड र बलिउडमा कुनै नायिकाले छोटा, पारदर्शी लुगा लगाएको नायिकाको संज्ञा दिइन्छ।तर, नेपालमा त्यही कुरा विवादको विषय बनिदिन्छ। साथै, कतिपय नायिकाहरु चर्चाका लागि यस्तो लुगा लगाउन चाहान्छन् । पछिल्लो समय भने छोटो लुगा लगाउनु सामन्य बन्दै गएपनि सामाजिक संजालमा भने ब्यापक चर्चा र बि,वाद हुनेगर्छ । प्रियंका कार्की‘नाई नभन्नु ल २’को स,क्से,स पार्टी चल्दै थियो। प्रियंका कार्कीको भि-त्री बस्त्र देखियो। यस विषयले मिडियामा हंगामा नै मच्यायो। साउन महिनामा भएको यो घटनापछि प्रियंकाले फेसबुकमा पत्रकारले फोटोशपमार्फत भि त्री ब, स्त्र देखिनेगरी फोटो बि गारेको आ ,रोप लगाइन्।\_ त्यसपछि उनको झन् आ, लोचना हुन थालेपछि स्टाटस हटाइन् र मामिला टुंगिएको बताइन्। प्रियंका यसअघि नै पहिरन वि ,वादमा भने आइसकेकी...
Jan212021 by Nawalpur DainikNo Comments
सोनिका रोकाय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित नाम हो । कलाकार, युट्युवर रोकाय अहिले आफ्नो जन्मथलो बझाङमा छन् । कोरोनाको जोखिम बढेसंगै मुलुकभर जारी भएको लकडाउनकाबीच बझाङ गएकी रोकाय अहिले पनि उतै समय विताउँदै छन् । काठमाडौंमा रहेर उनले बनाएका युट्युव भिडियो निकै चर्चित हुने गरेका थिए । अहिले उनले बझाङवाट सामाजिक परिवेशका भिडियो सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् ।बुवा आमाले गरेका खेती किसानीका कामलाई सहयोग गर्दै उनले बिताएका गाउँले जिवन पनि वास्तवमै लोभलाग्दो छ । त्यहाँका मनोरम दृष्य उनले सार्वजनिक गरेका भिडियोमा देख्न सकिन्छ । केही वर्ष अघि उनले निर्माण गर्ने युट्युव कार्यक्रम वाओ नेपालमा दुई अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग हुने गर्थे भने त्यसमा प्रशासन भएका भिडियो सामग्री पनि सामान्य नागरिककालागि अस्वभाविक लाग्ने खालका हुने गरेका थिए । त्यस्तो कार्यक्रम चलाए बापत निकै आलोचना सहदै आएकी सोनिकाले आफुले...
अभिनेत्री साम्राज्ञीको जवानी, सार्बजनिक भए यस्ता तस्बिर। मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने सुन्दरता…. (१५ तस्बिर सहित)
सञ्जालमा सक्रिय हुँदै सबै क्षेत्र् केहि व्यबसाय चलायमान भएपनि, मनोरञ्जन क्षेत्र भने चलायमान भइरहेको छैन। तर पनि कलाकारहरु भने सामाजिक संजालमा सक्रिय छन्, यसै बिचा नायिका सा’म्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुँदै आएकी छिन् । उनले पछिल्लो समय आकर्षक तस्बिरहरु सार्वजनिक गरिरहेकी छिन् ।२०५२ मंसिर २ गते काठमाडौंमा मोडल म’हेशबिक्रम शाह र गायिका नेहा रा’ज्यलक्ष्मी शाहको सन्तानको रुपमा जन्मिएकी उनले केही समयअगाडी २५ औं जन्मदिन मनाएकी थिइन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भुवन केसी निर्मित ‘ड्रिम्स’बाट अभिनय सुरु गरेकी शाहलाई पहिलो फिल्मबाटै सफलता हात पर्यो । त्यसपछि ‘ए मेरो हजुर २’ अभिनय गरेकी उनले त्यसपछि पछाडी फर्किएर हेर्नुपरेको छैन । अहिले पनि उनले तीन फिल्म साइन् गरेकी छन् ।अहिलेसम्म ‘तिमी सँग’, ‘कायर’, ‘रातो टिका निधारमा’, ‘मारुनी’, ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ अभिनय गरेकी ...
बेहुली बन्दा यस्ती देखिइन् चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारी दुलही बनेका हेरौ (फोटो सहित)
लगनको सिजन सकियो तर एक मोडलले भने विवाह गरेकी छन् । चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीले लगनगाठो कसेकी हुन । तर उक्त लगनगाठो रियल लाईफमा नभै रिल लाईफ अर्थात एक म्युजिक भिडियोको लागि गरेकी हुन् । उनलाई बेहुली अवतारमा निकै राम्री देखिएको छ । उनको फ्यानहरुले पनि राम्रो देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन भने भिडियोकै लागि भएपनि गरिएको विवाहको उनलाई सुभकामनाहरु आईरहेको देख्न सकिन्छ । उनले उक्त फोटोहरुलाई आफ्नो सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेकी छन् । हेर्नुस् सो तस्वीरहरु । ...
बिहेपछि सिन्दुर पोते र रातो साडीमा देखिइन श्वेता सार्वजनिक भए यस्ता तस्बिर। फ्यानलाइ मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने (१० तस्बिर सहित)
जीवनशैली, पत्रपत्रिकाबाट, फोटो फिचर
नायिका श्वेता खड्काले हाल्सालै धुमधामले बिबाह गरेकी छिन् । प्रेमी विजयन्द्रसिंह रावतसँग गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा श्वेताले विवाह गरेकी श्वेताले अहिले आफ्नो विबाहपछिको जीवन सुरु गरेकी छिन् । सिमित साथीभाई र आफन्त माझ धुमधामले विबाह विबाह गरेर घरमा गएपछि परिवारसँग खुशी देखिएकी श्वेता सिन्दुर, पोते र रातो चुरा अनि साडीमा निकै खुलेकी छिन् । आँफैमा सुन्दरताकी खानी श्वेता मेकअप सहित विबाहका पछिका दिनमा झनै राम्री देखिएकी छिन् । हिन्दू परम्परा अनुसार बिबाह गरेर विजयेन्द्रको घरमा गएकी श्वेताका पति विजयन्द्र सिंह रावत धनग डीबासी हुन् । उनी घरका कान्छा छोरा हुन् । घरमा आमा बुवा सहित एक दाजु छन् । व्यापारिक घरनाका विजयन्द्र र नायिका, निर्मात्री, उद्यमी र समाजसेवी श्वेता विगत केही समयदेखि रिलेसनसिपमा पनि थिए । विजयेन्द्रको घरमा श्वेतामा देखिएको रमाइलो खुशिको माहोल हेर्न लायक थियो नै, हेर्नुहोस ...
Jan202021 by Nawalpur DainikNo Comments
डान्स इन्डिया डान्स ले नेपाली र भारतीय दर्शकमाझ लोकप्रियभारतीय टेलिभिजन ‘डान्स इन्डिया डान्स’ बाट चर्चामा आएकि नायिका तेरिया पाउजा मगर पछिल्लो समय चर्चामा रहिरहने सेलिब्रेटी हुन् । रुपन्देहीमा जन्मेकी तेरिया लामो समय आफ्नो करिअरका लागि मुम्बईमा बसिन् । ‘डान्स इन्डिया डान्स’ ले नेपाली र भारतीय दर्शकमाझ लोकप्रिय बनायो तेरियालाई । केही समय पहिले उनी एक नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्ने खबर पनि बाहिर आएको थियो । पछि उनले आफूले फिल्ममा अभिनय गर्न नलागेको बताएकी थिइन् । सञ्जालमा निकै पछ्याएका हुन्छन् । इन्स्टाग्राममा पनि उनी निकै सक्रियतेरियालाई फ्यानले सामाजिक सञ्जालमा निकै पछ्याएका हुन्छन् । इन्स्टाग्राममा पनि उनी निकै सक्रिय रहन्छिन् । कहिलेकाहीँ इन्स्टाग्राममा लाइभ आएर उनी फ्यानसँग कुराकानी पनि गर्छिन् । इन्स्टामा उनले विभिन्न तस्वीर तथा भिडियो शेयर गर्ने गरेकी छिन् ।फ्यानले निकै रु...